Kuhle Ezokungcebeleka Zonke-Inclusive EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle Ezokungcebeleka Zonke-Inclusive EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/04/2020)
Ukuhlela iholide eYurophu kwesinye isikhathi kungathatha isikhashana. Isihambi ecophelelayo, kungcono abalulekile isikhathi ukutshalwa kwezimali ucwaningo Logistics ikhambo bese ukhetha indawo ukuze uhlale. Kufanele yini uphumele ahlanganisa yonke indalo noma cha? Kanjani wena uya khona, ngu isitimela noma ibhanoyi? Kusemqoka ngempela ukucabangela zonke izinhlangothi ngaphambi kukho kungenzeka ngaphambi kokuthi wenze izinqumo ezinhle. Uma ukhetha ukuhlala i resort ahlanganisa yonke indalo, eziningi ezinkulu izindawo European uke ehlanganiswa. Uma uhamba nge-Europe, ungakwazi kujabulele sokuhlala okungcono zokungcebeleka yonke indalo futhi sizofika kanjani kule ndawo kahle ngesitimela. Nakhu uhlu lwethu okungcono zokungcebeleka yonke indalo eYurophu awukwazi miss:
It is njengelinye lamazwe zokulala enhle kakhulu, hhayi nje kuphela Puglia kodwa lonke elase-Italy kanye Europe. Borgo Egnazia ibala njengoba omunye the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu. Borgo Egnazia intando charm nawe bendabuko isitayela yezakhiwo uzoqaphela yonkana Puglia, kanye namakamelo awo ezihlotshiswe kahle, amachibi, igalofu ngisho namakilabhu umsebenzi izingane kanye nentsha. Thola Bari noma Brindisi ngesitimela bese bahambe baye Savelletri di Fasano, ukuthatha umzila ebabazekayo ukubona bonke ubuhle Puglia.
Naples ukuze Brindisi Izitimela
Amathikithi aseNaples kuya eBari Isitimela
Bari ukuze Fasano Izitimela
Naples ukuze Fasano Izitimela
I San Pietro di Positano, Italy
Italy has izindawo eziningi langa ukuvakashela, kodwa ogwini Amalfi kuyinto ozithandayo phakathi amaNtaliyane ngokwabo. Futhi omunye the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu khona lapho. San Pietro, nge yayo 57 amakamelo kanye ebukekayo beach-side yokudlela ziyojabula njengoba kwenziwa kuwe ubuhle esifundeni. Ungakwazi ukubhuka okusheshayo isitimela ugibele ezimbalwa ukuze uthole Amalfi, ukusuka eNaples noma Salerno - futhi ujabulele ukubukwa endleleni.
Amathikithi eMilan kuya eSareno lapha amathikithi
Amathikithi aseFlorence kuya eSalesno
Amathikithi e-Bari kuya eSalerno
IRoma ukuya eSalesrno Amathikithi wesitimela
Kuhle zokungcebeleka yonke indalo eYurophu ethandekayo – Club Med Opio Provence, France
Uma ungumuntu ngokuvakashela France futhi ngifuna emnandi kakhulu ahlanganisa yonke indalo, ubhekisise Provence futhi Club yayo Med Opio resort. Neminqumo, lavender emasimini abazobe elinde wena ukuhlola kubo, eceleni enhle Côte d'Azuri. Club Med Opio Provence inikeza ukudla emangalisayo nge lesifunda cuisine amakhono, amakamelo amakhulu, futhi amaningi imisebenzi ngawe noma izingane - ungase uthathe ngisho izifundo kyokushin! Ungathola noma kuphi kule ndawo ngokusebenzisa TER Provence-Alpes-Côte d'Azuri (TER PACA) inethiwekhi wesitimela.
Amathikithi eDijon kuya eProvence Isitimela
Amathikithi eParis kuya Provence Isitimela
Amathikithi eMarseilles kuya amathikithi wesitimela saseProvence
Amathikithi e-Lyon kuya eProvence Isitimela
Ihhotela Tannenhof, Austria
Uma uthanda izintaba ezinhle esikhundleni elikhulu amabhishi, one of the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu ngawe ukuvakashela kungaba e-Austria sika Tyrolean Alps. Ihhotela Tannenhof uqhosha kakhulu ukubukwa entabeni, futhi kungcono omkhulu ski ukubaleka labo abakhetha kancane ngaphezulu umoya yangasese. Ungakwazi ukufinyelela Ischgl kalula kusuka Innsbruck, Zurich noma Munich - isitimela kuzokusa Landeck, ngemva kwalokho resort kuyinto drive iDemo kude.
Vienna ukuze Landeck Ischgl Izitimela
Munich ukuze Landeck Ischgl Izitimela
Salzburg ukuze Landeck Ischgl Izitimela
Zurich ukuze Landeck Ischgl Izitimela
KOR-kuyona e esifundeni elihle Bavaria liphakathi engcono zokungcebeleka yonke indalo eYurophu, ikakhulukazi uma kuziwa Izinsiza ukuhlinzeka ezifana ski-ngamakheshi kanye amakamelo kahle.
Skiing iyona isici esikhanga kakhulu nge e Brannenburg, okuyinto unga ukufinyelela kalula ngesitimela kusukela Berlin nakwamanye amadolobha Germany naseYurophu.
Munich ukuze Brannenburg Izitimela
Berlin ukuze Brannenburg Izitimela
Hanover ukuze Brannenburg Izitimela
EHamburg Brannenburg Izitimela
Kuhle zokungcebeleka yonke indalo eYurophu Ending
Uma ufisa ukujabulela uhambo lwakho ku zokungcebeleka engcono eYurophu banganikeza, ukuhlela uhambo lwakho futhi ukubhuka amathikithi akho isitimela ekuseni ukusizakala amadili best!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-all-inclusive-resorts-europe/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / zh-CN ukuba / de noma / ru futhi ngezilimi ezingaphezu.
#All-InclusiveResorts #allinclusive #zokungcebeleka #traveleurope europetravel amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi
Indlela Hlela evakashele eYurophu